Ny natao tany an-toerana kosa tranga 17 tamin’ny fitiliana 40 no hita. Ny CICM kosa nanao fitiliana vaovao 125 ka olona 6 no “pisitifs”, izay ny 5 teto an-dRenivohitra, ary 1 tany Tanambao V Toamasina. Ho an’ireo 5 teto Antananarivo, dia 4 teny Anjanahary, ary 1 teny Manjakaray. Nisy 4 vaovao sitrana teny amin’ny Hopitaly Befelatanana, ka 135 ny fitambarany hatreto. Miisa 2 hatrany ny trangana fahafatesana ofisialy ny nohamarinin’ny fanjakna, ary 311 kosa ireo mbola tsaboina. Misy marary 2 tena ahiana mafy ny ainy na “formes graves” any Toamasina, izay arahin’ny mpitsabo maso akaiky. Mihazakazaka hatrany ny isan’ny olona voan’ny covid-19 eto Madagasikara, izay misy tranga manodidina ny 40 isan’andro taterina. Tena tsy voafehy ny fipariahan’ity valanaretina ity eto Madagasikara. Tsy ho ela dia mety ho feno ilay fandriana 497 nambara fa efa vonona handraisana marary, ary ahiana tsy ho araka ny fitsaboana eo anatrehan’ny fiakaran’ny isa. Mitaintaina andro aman’alina ny mpiasan’ny fahasalamana, toy ny ao Toamasina. Na efa ambara fa manana ny fanafody mahasitrana aza isika, dia vitsy ny sitrana isan’andro mitaha amin’ny olona voa. Ny atsy amin’ny Nosy Maorisy, izao efa 25 andro tsy nisy tranga vavao. 332 ny narary, ka ny 10 no maty, sitrana avokoa ny 322 ambiny. Mahatratra 98 074 ny olona natao fitiliana, ka 2 409 ny tao anatin’ny 24ora. Aiza ho aiza amin’izany I Madagasikara? Marina fa manana fanafody CVO isika, saingy afaka maka traikefa amin’ireny hoe inona ny fitsaboana na fombafomba natao nahasitrana tao anatin’ny fotoana fohy ireo marary mitovitovy isa amin’ny antsika ankehitriny?